Manchester United, Iyo Liverpool Oo Isha Ku Haya Saxiixa Christian... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Manchester United, iyo Liverpool oo isha ku haya saxiixa Christian…
Manchester United, iyo Liverpool oo isha ku haya saxiixa Christian…
Kooxaha waa weyn ee Premier League ee Manchester United iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku hayaan xaalada Christian Pulisic ee kooxda Chelsea .
22-sano jirkaan, oo laga saaray safka koowaad ee kulankii ay guusha ka gaareen Everton habeenkii Isniinta, ayaan weli bilaabin kulan Premier League ah oo uu leyliyo tababaraha Blues Thomas Tuchel ..
Pulisic wuxuu ahaa mid ka mid ah waxqabadyadii ugu fiicnaa ee Chelsea markii kubbada cagta ay dib u bilaabatay waxaana loo arkaa inuu yahay xubin muhiim ka ah safka ka hor imaatinka Tuchel.
Si kastaba ha noqotee, xidiga Mareykanka wuxuu wajahayaa tartan dhanka xulashooyinka weerarka ah, Mason Mount , Timo Werner , Callum Hudson-Odoi iyo dhawaanahan Kai Havertz ayaa kaga doorbiday safka hore.
Ka dib markii ay qaadatay ku dhowaad sagaal bilood si loo qanciyo tababarihii hore Frank Lampard isla markaana uu u noqdo mid si joogto ah u bilaaba, way adag tahay in xidigan uu boos ka helo macalinka Cusub.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Pulisic uma badna inuu yeelan doono dulqaad si uu u muujiyo qiimahiisa mar kale Stamford Bridge, iyadoo ay jiraan calaamado muujinaya in uu kooxda iskaga tagi karo -kuna biiro karo midkood kooxaha Manchester United ama Liverpool oo xiiseenaya.
Pulisic, oo Chelsea ugu fadhiyay adduun dhan 58 milyan oo ginni bishii Janaayo 2019, ayaa ku soo bilowday kaliya sagaal kulan oo Premier League ah illaa iyo haatan ololahan, isagoo dhaliyay kaliya hal gool ciyaartii ay bishii December ka adkaadeen Leeds United.
Christian haya isha iyo Liverpool Manchester saxiixa United
Itoobiya oo diiday arrin ay soo jeedisay Sudan iyo xiisadda kasii dareysa
Xukuumadda Yemen oo Xuutiyiinta Ku Eedeysay in ay Gubeen Muhaajiriin Itoobiyaan...